Andramena tany Singapour : « Tokony henjehina ireo tompon’andraikitra malagasy », hoy ny AVG | NewsMada
Andramena tany Singapour : « Tokony henjehina ireo tompon’andraikitra malagasy », hoy ny AVG
Niakatra tao amin’ny fandaharana « Ambarao », Alliance 92 FM, omaly, ny filohan’ny Alliance voahary gasy (AVG), Razakamanarina Ndranto. Anisan’ny nasiany teny mikasika ny raharaha andramena, indrindra ny tany Singapour, nahatraran’ny fitondrana any an-toerana bolabola 30.000, ny taona 2014 saika haondrana any Hong-Kong. Nohitsiny fa tsy nahafa-po azy iny raharaha iny. Resaka fanafarana andramena ny nanenjehan’ny fitsarana any Singapour ireo meloka tany aminy. Tsy noraisin’izy ireo ny zava- nisy avy aty Madagasikara satria tsy nahavita nanome porofo sy tsy nanenjika ireo tompon’andraikitra sy mpiray tsikombakomba malagasy ny fanjakana malagasy.
Nomarihiny koa fa misy « Raharaha andramena » hafa any ivelany tsy mbola misy tohiny, toy ny tratra tany Zanzibar sy Hong-Kong. Eo koa ny eto an-toerana, zara raha ny 1/3-n’ny asa nampiandraiketin’ny Cites ny fanjakana no vita amin’ny fanisana ny tahiry, ny tsy fanasaziana ny mpanao trafika, sns.
Tsy mahafehy ny toekarena ny ankamaroan’ny fikambanana mpiaro
Maro koa ny lafin-javatra hafa noresahiny, toy ny tsy fisian’ny fotodrafitrasa sy ny paikadim-pampandrosoana any amin’ny ankamaroan’ny faritra arovana. Mpiasam-panjakana voasazy ireo afindra miasa any amin’ireny toerana ireny. Saika tsy mahafehy ny lafiny fampandrosoana ara-toekarena ny ankamaroan’ny fikambanana tsy miankina sy ny ONG, miaro ny tontolo iainana. Tsy mahavita manasongadina ny tena fampandrosoana eny ifotony, mampifandray ny mpandraharaha sy ny vahoaka, sns.
Amin’ny lafiny ankapobeny, tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy ny harena voajanahary eto amintsika. Misy tombontsoan’olom-bitsy voakitikitika amin’izany, mahatonga azy ireny manakana tsy hanatanterahana ny tena fitrandrahana araka ny tokony ho izy. « Tsy tokony hatao varo-boba toy izao ny harena an-kibon’ny tany eto amintsika ».